ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ FAQs / Createproto - Createproto Tech Co. , Ltd.
အရင်းအမြစ်များ / မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
Protolabs နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကားအဘယ်နည်း။ ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုလုပ်ရန်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်သင့်သနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုဆိုင်ရာ 3D ပုံနှိပ်ခြင်း၊ CNC စက်ခြင်း၊ စာရွက်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဆေးထိုးခြင်းမှိုဝန်ဆောင်မှုများသည်ဖောက်သည်၏ 3D CAD မော်ဒယ်မှတိုက်ရိုက်လုပ်သောအရာများမှအမှားများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးသည်။ စီးပွားဖြစ်ဆော့ဗ်ဝဲသည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကိုလျော့ချရန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချရန်အတွက် toolpath မျိုးဆက်ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်သောစီမံကိန်းများ၏ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုသဘောသဘာဝကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏စာရင်းကိုထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုပါ။ သို့သော်ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းများကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အောင်မြင်မှုပုံပြင်များကိုဤနေရာတွင်ဖတ်ပါ။
CreateProto နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန် non- ဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ခြင်းမပြုရန်သဘောတူညီချက် (NDA) လိုအပ်ပါသလား။
CreateProto နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ရန် NDA မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ CAD ပုံစံသို့ကျွန်ုပ်တို့၏ CAD မော်ဒယ်ကိုတင်သောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့်မြင့်စာဝှက်စနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ သင်တင်ပို့သမျှသည်လျှို့ဝှက်တာဝန်ဝတ္တရားများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကသင်၏အကောင့်ကိုယ်စားလှယ်ကိုဆက်သွယ်ပါ။
အဘယ်အရာကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအသုံးပြုကြသည် ဖန်တီးသူ ဝန်ဆောင်မှုများ?
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ယာဉ်များ၊ အလင်းရောင်၊ လေယာဉ်ကွင်း၊ နည်းပညာ၊
ဆေးထိုးခြင်း - မှိုကိရိယာတန်ဆာပလာများပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်ပမာဏကြီးမားသောစက်လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်များမပြုလုပ်မီထုတ်လုပ်မှုအပိုင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှနီးကပ်သည့်အပိုင်းတစ်ခုကိုသင်စမ်းသပ်လိုပေမည်။ CNC စက်သည်ဤအခြေအနေအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အင်ဂျင်နီယာများသည်မကြာခဏစမ်းသပ်ကိရိယာများ၊ တပ်ဆင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာလိုအပ်သည်။ စက်ယန္တရားသည်ဤနေရာတွင်လည်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်ရိုးရာစက်ဆိုင်များသည်ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက်သိသိသာသာထပ်ခါတလဲလဲမရှိသောအင်ဂျင်နီယာ (NRE) ကိုအားပေးသည်။ ဤ NRE စွဲချက်သည်အလွန်သေးငယ်သောပမာဏကိုမတတ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ အလိုအလျောက် CNC စက်ပြုလုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်ရှေ့ပြေး NRE ကုန်ကျစရိတ်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာရောင်းချနိုင်ပြီးအစိတ်အပိုင်းများကို ၁ ရက်လောက်မြန်မြန်သိမ်းနိုင်သည်။
Injection molding သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်စျေးကွက်စမ်းသပ်ခြင်း၊ တံတားတန်ဆာပလာများသို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုနည်းသောနမူနာများအတွက်နမူနာအမြောက်အများကိုထောက်ပံ့ရန်သင့်တော်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သံမဏိကိရိယာတစ်ခုကိုမပြုလုပ်မီအစိတ်အပိုင်းများလိုအပ်ပါက (ပုံမှန်အားဖြင့် ၆ မှ ၁၀ ပတ်ခြားသည့်အခြားပုံသွင်းသူများနှင့်) သို့မဟုတ်သင်၏ပမာဏလိုအပ်ချက်သည်စျေးကြီးသောသံမဏိထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာကိရိယာများကိုမမျှတပါကကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အဝဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်ထုတ်လုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ 1 မှ 15 ရက်အတွင်း။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်လက်ရှိတွင်စက် ၁၀၀ ကျော်၊ ခုံများ၊ 3D ပရင်တာများ၊ ပုံနှိပ်စက်များ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှည်လျားသောတိုးတက်မှုသမိုင်းနှင့်အတူ, ဒီအရေအတွက်ကအမြဲပြောင်းလဲနေပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်ကိုးကားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင် 3D CAD မော်ဒယ်ကိုသာတင်ပါ။ သင်သည်အခမဲ့ဒီဇိုင်းတုံ့ပြန်ချက်နှင့်အတူနာရီအတွင်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ကိုးကားချက်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ တင်ပြထားသောဒီဇိုင်းတွင်ပြproblemနာရှိသောနေရာများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးကားထားသောအင်ဂျင်သည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာပြonနာများနှင့်ပတ်သက်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားပြီးဖြစ်နိုင်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုအကြံပြုသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုတစ်ပြိုင်တည်းကိုးကားနိုင်ပါသလား။
ဆေးထိုးရန်ပုံသွင်းခြင်းနှင့်စက်ပြုလုပ်ရန်အတွက်သင်ကိုးကားစရာရနိုင်သော်လည်း 3D ပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်ဒုတိယကိုးကားရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် SolidWorks (.sldprt) သို့မဟုတ် ProE (.prt) ဖိုင်များအပြင်အခြား IGES (.igs), STEP (.stp), ACIS (.sat) သို့မဟုတ် Parasolid (ရှိ) အခြား CAD စနစ်များမှအစိုင်အခဲ 3D CAD မော်ဒယ်များကိုလက်ခံနိုင်သည်။ x_t သို့မဟုတ် .x_b) format နဲ့။ .stl ဖိုင်များကိုလည်းလက်ခံနိုင်သည်။ Two- ရှုထောင် (2D) ရေးဆွဲလက်ခံခဲ့သည်ကြသည်မဟုတ်။
ကျွန်ုပ်မှာ 3D CAD ပုံစံမရှိပါ။ ငါ့အတွက်တစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်မလား?
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချိန်တွင်မည်သည့်ဒီဇိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမျှမပေးပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်ကို 3D CAD ပုံစံဖန်တီးရန်သင်အကူအညီလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောဒီဇိုင်နာများအတွက်သင့်အားဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိပါမည်။
Protolabs သည် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အပြီးသတ်ရွေးချယ်မှုများနှင့်အလယ်အဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပေးပါသလား။
3D ပုံနှိပ်ခြင်း၊ စာရွက်သတ္တုနှင့်ဆေးထိုးခြင်းမှိုလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်အဆင့်မြင့်ပြီးသောရွေးချယ်မှုများနှင့်အလယ်တန်းလုပ်ငန်းစဉ်များရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခုအချိန်တွင် CNC စက်အတွက်ဒုတိယအဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်များမကမ်းလှမ်းပါ။
ပထမ ဦး ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း (FAI) ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးပါသလား။
ကျနော်တို့ FAIs စက်နှင့်ပုံသွင်းအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ကိုဆက်ကပ်။
CreateProto တွင် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
ကျွန်တော်တို့ CreateProto မှာလုပ်သမျှ စက်ရုံအတွင်းအမြန်ဆုံးနှင့်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများကိုထောက်ပံ့အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သည်။ ဤသည်ကိုတင်းကျပ်သောဖြစ်စဉ်ကိုထိန်းချုပ်မှုကစီမံခန့်ခွဲနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာလိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်မှုအဆင့်အတန်းသုံး 3D ပုံနှိပ်စက်သည်အဆင့်မြင့်ပြီးတည်ဆောက်မှုတိုင်းနှင့်အတူအသစ်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရန်အထူးထိန်းသိမ်းထားသည်။ ငါတို့အားလုံးကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော ၀ န်ထမ်းများသည်သင်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဂရုတစိုက်သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီထုတ်လုပ်သည်။
stereolithography (SL) သည် 3D ပုံနှိပ်ခြင်းနည်းပညာ၏သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အလုံးစုံတိကျမှု၊ ၎င်းသည်သေးငယ်သောအချက်သို့အာရုံစူးစိုက်သောခရမ်းလွန်လေဆာကိုအသုံးပြုပြီးအပူ thermoset ဗဓေလသစ်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဆွဲသည်။ ဆွဲယူသည့်နေရာတွင်အရည်သည်အစိုင်အခဲအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်။ ရှုပ်ထွေးပြီးသုံးဖက်မြင်အပိုင်းအစများကိုဖွဲ့စည်းရန်အလွှာများရှိသောပါးလွှာသောရှုထောင့် ၂ ခုဖြင့်ထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်သည်။ ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောလေဆာရောင်ခြည် (SLS) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ယုတ်ညံ့သော်လည်း၊
ရွေးချယ်ထားသောလေဆာရောင်ခြည် (SLS) သည် CO2 လေဆာရောင်ခြည်ကိုအသုံးပြုပြီးအပူရေစုပ်မှုန့်အမှုန့်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဆွဲယူသည့်နေရာတွင်အမှုန့်ကိုအစိုင်အခဲအဖြစ်သို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်စုပ်ပေးသည်။ အလွှာတစ်ခုစီပြီးသောအခါ roller သည်အိပ်ရာပေါ်၌အမှုန့်သစ်အလွှာတစ်ခုကိုတင်ထားပြီးလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပြန်လည်ပြုလုပ်သည်။ SLS သည်အမှန်တကယ်အင်ဂျင်နီယာ thermoplastics ကိုအသုံးပြုသောကြောင့်၎င်း၏ 3D ပုံနှိပ်အစိတ်အပိုင်းများသည်ပိုမိုခိုင်မာသည်။
PolyJet သည်အမျိုးမျိုးသောရှုပ်ထွေးသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ရှုပ်ထွေးသောဂျီသြမေတြီများပါ ၀ င်သည့် Multi- ပစ္စည်းများရှေ့ပြေးပုံစံကိုတည်ဆောက်သည်။ သံမဏိပြားများ (durometers) များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ ၎င်းသည် gaskets, sealing နှင့် housings ကဲ့သို့သော elastomeric အင်္ဂါရပ်များရှိအစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ပါသည်။ PolyJet သည် jetting လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းတွင်အရည် photopolymer ၏သေးငယ်သောအစက်ငယ်များကိုဂေဟစနစ်များစွာမှတည်ဆောက်ခြင်းပလက်ဖောင်းပေါ်သို့အလွှာအလွှာဖြင့်သဲလွန်စဖြန့်ထားသည်။ တည်ဆောက်ပြီးနောက်, ထောက်ခံမှုပစ္စည်းကို manually ဖယ်ရှားပစ်ပါသည်။ ထို့နောက်အစိတ်အပိုင်းများကိုဆေးမကုရန်မလိုဘဲအသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။
Direct Metal Laser Sintering (DMLS) သည်အမှုန့်များကိုအစိုင်အခဲအဖြစ်ဂဟေဆော်ခြင်းဖြင့်အက်တမ်သတ္တုအမှုန့်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ဆွဲယူသည့်ဖိုင်ဘာလေဆာစနစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ အလွှာတစ်ခုစီပြီးနောက်၊ recoater blade သည်အသစ်သောအမှုန့်အလွှာတစ်ခုကိုပေါင်းထည့်ပြီးနောက်ဆုံးသတ္တုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမဖွဲ့စည်းမှီအထိလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထပ်မံပြုလုပ်သည်။ DMLS သည်သတ္တုစပ်အများစုကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးအစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်မှုအစိတ်အပိုင်းများနှင့်တူသောပစ္စည်းနှင့်ပြုလုပ်ထားသည့်အလုပ်လုပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းများကိုအလွှာအလိုက်တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်သွပ်သွင်း။ မရနိုင်သောသို့မဟုတ်အခြားစက်ပစ္စည်းများမပါ ၀ င်နိုင်သောအတွင်းပိုင်းအင်္ဂါရပ်များနှင့်လမ်းကြောင်းများကိုဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။
DMLS အစိတ်အပိုင်းများသည် ၉၇% သိပ်သည်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ကိုင်သောစီမံကိန်းများ၏စီးပွားဖြစ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုသဘောသဘာဝကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏စာရင်းကိုထုတ်ဖော်ခြင်းမပြုပါ။ သို့သော်ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုအကြောင်းများကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်ရရှိသည်။ ဒီမှာဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုကိုဖတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအချိန်တွင်မည်သည့်ဒီဇိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုမျှမပေးပါ။ သင်၏အကြံဥာဏ်ကို 3D CAD ပုံစံဖန်တီးရန်သင်အကူအညီလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ထံအီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသောဒီဇိုင်းကုမ္ပဏီများအတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးလိမ့်မည်။
CreateProto တွင် 3D ပုံနှိပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏ပုံမှန်ကုန်ကျစရိတ်မှာအဘယ်နည်း။
စျေးနှုန်းက ၉၅ ဒေါ်လာဝန်းကျင်လောက်ရှိပေမယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ interactive quote ရဖို့အတွက် 3D CAD မော်ဒယ်ကိုတင်ဖို့ပါပဲ။
CreateProto ၏ CNC စက်စွမ်းရည်သည်အဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလွန်နည်းသောအစိတ်အပိုင်းများကိုအလွန်လျင်မြန်စွာကြိတ်ဆုံနှင့်လှည့်။ ပုံမှန်ပမာဏသည်အပိုင်း ၁ မှ ၂၀၀ အထိဖြစ်ပြီးကုန်ထုတ်ချိန်များသည် ၁ ရက်မှ ၃ ရက်အထိဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများကိုအင်ဂျင်နီယာအဆင့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများကို ပေး၍ အလုပ်လုပ်ရန်စမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်နောက်ဆုံးအသုံးပြုခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
CreateProto လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာထူးခြားသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးကားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်စက်ရုံလုပ်ငန်း၌မကြုံစဖူးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြီးမားသောတွက်ချက်မှုအစုအဝေးပေါ်တွင်လည်ပတ်။ သင်၏အစိတ်အပိုင်းကိုစက်တပ်ရန်လိုအပ်သော CNC လမ်းစဉ်များကိုထုတ်ပေးသောစီးပွားဖြစ်ကိုးကားသည့်ဆော့ဖ်ဝဲတီထွင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်သည်အမြန်ဆုံး၊ အဆင်ပြေလွယ်ကူ။ လွယ်ကူသောနည်းလမ်းများနှင့်ကိုးကားရန်နှင့်စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုမှာယူရန်ဖြစ်သည်။
စျေးနှုန်းက ၆၅ ဒေါ်လာဝန်းကျင်လောက်ရှိပေမယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ 3D CAD မော်ဒယ်လ်တင်ပြီး ProtoQuote အပြန်အလှန်ကိုးကားမှုရဖို့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်အလိုအလျောက်တပ်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်များကိုသုံးသောကြောင့်ထပ်ခါတလဲလဲမဟုတ်သောအင်ဂျင်နီယာကုန်ကျစရိတ်မရှိပါ။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ယူပမာဏကို ၁ မှ ၂၀၀ အထိထိသက်သာစေပါသည်။ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စျေးနှုန်းများမြင့်မားသည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်၊ သို့သော်စက်သည်ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်မျက်နှာပြင်များကိုတိုးတက်စေသည်။
သင်၏ 3D CAD မော်ဒယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့တင်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏ဒီဇိုင်းကိုပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်ရန်စျေးနှုန်းကိုတွက်ချက်ပြီးသင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ပုံသဏ္viewာန်အဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်ပမာဏအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်သင်၏စက်အစိတ်အပိုင်းသည်သင်၏မူလမော်ဒယ်နှင့်ကွဲပြားသောကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်မည်သို့နှိုင်းယှဉ်မည်ကို 3D အမြင်အားအကဲဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုးကားချက်ဖြစ်သည်။ ဒီမှာ ProtoQuote ကြိုတင်ကြည့်ရှုခြင်းကိုကြည့်ပါ။
Machining အတွက် CreateProto သိုလှောင်ထားသောပစ္စည်းများဘာတွေလဲ။
ABS, နိုင်လွန်၊ PC နှင့် PP မှသံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီနှင့်ကြေးဝါများအထိအမျိုးမျိုးသောပလပ်စတစ်နှင့်သတ္တုပစ္စည်းများသိုလှောင်ထားသည်။ ကြိတ်ခွဲခြင်းနှင့်လှည့်ခြင်းအတွက်သိုလှောင်ထားသောပစ္စည်း ၄၀ ကျော်စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ပစ္စည်းအတွက်ဖောက်သည်များမှထောက်ပံ့သောပစ္စည်းများကိုလက်မခံပါ။
CreateProto ၏စက်စွမ်းရည်ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ငါ့အစိတ်အပိုင်းကဘယ်လောက်အရွယ်အစားဖြစ်နိုင်သလဲ
ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းကို 3D ပုံနှိပ်ခြင်းထက်အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သနည်း။
စက်အစိတ်အပိုင်းများသည်သင်ရွေးချယ်သောပစ္စည်း၏စစ်မှန်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်သင် 3D ပုံနှိပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများထက်ပိုမိုမြန်ဆန်လျှင်မြန်သောပလတ်စတစ်နှင့်သတ္တု၏လုပ်ကွက်များမှအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ချိန်တည်းဘောင်အတွင်းတွင်ရရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်လုပ်ရန်ရှေ့ပြေးပုံစံများနှင့်နောက်ဆုံးအသုံးပြုမည့်အပိုင်းများကို ၃ ရက်အတွင်းမြန်အောင်လုပ်သည်။
ဒီဇိုင်းနှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် CreateProto သည်အရည်အသွေးကောင်းသောစာရွက်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုရက်အတွင်းသင့်လက်ထဲသို့ရောက်နိုင်သည်။
စျေးနှုန်းများကွဲပြားသော်လည်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ပထဝီအနေအထားနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုပေါ် မူတည်၍ ဒေါ်လာ ၁၂၅ ဝန်းကျင်ရှိသည်။ သင်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုခန့်မှန်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာသင်၏နာရီကိုအခမဲ့နာရီရရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ချက်ချင်းကုန်ကျလို။ ထုတ်လုပ်လိုသောတုန့်ပြန်မှုများအတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ Solidworks အတွက်အခမဲ့ add-in eRapid ကို download လုပ်ပါ။
စာရွက်သတ္တုများကိုးကားချက်များအတွက်သင်၏ CAD မော်ဒယ်နှင့်သတ်မှတ်ချက်များကို quote.rapidmanufacturing.com သို့အပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်သည်နာရီပိုင်းအတွင်းအသေးစိတ်ကိုးကားချက်များကိုရရှိလိမ့်မည်။ သင်မှာယူရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးသည်နှင့်သင်မှာယူရန် myRapid သို့လော့အင်ဝင်နိုင်သည်။
စာရွက်သတ္တုအတွက် CreateProto သိုလှောင်ထားသောပစ္စည်းများဘာတွေလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်သံမဏိ၊ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီနှင့်ကြေးဝါများအပါအဝင်အမျိုးမျိုးသောသတ္တုပစ္စည်းများသိုလှောင်ထားပါသည်။ စာရွက်သတ္တုထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်သိုလှောင်ထားသည့်ပစ္စည်းများစာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။
CreateProto ၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများကဘာလဲ။ ငါ့အစိတ်အပိုင်းကဘယ်လောက်အရွယ်အစားဖြစ်နိုင်သလဲ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပလပ်စတစ်နှင့်အရည် silicone ရော်ဘာပုံသွန်းခြင်းအပြင်အလွန်သေးငယ်သောပမာဏနှင့်ပမာဏ ၂၅ မှ ၁၀၀၀ အထက်အထိပုံသွင်းခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ပုံမှန်ကုန်ထုတ်ချိန်သည် ၁ ရက်မှ ၁၅ ရက်အထိဖြစ်သည်။ လျင်မြန်သောဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံများနှင့်အလုပ်လုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုအလုပ်လုပ်ရန်သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးအသုံးပြုရန်အတွက်ရက်များအတွင်းရရှိနိုင်စေသည်။
ဖောက်သည်များထောက်ပံ့ပေးသည့် 3D CAD အစိတ်အပိုင်းမော်ဒယ်များကို အခြေခံ၍ ပုံသွင်းခြင်း၊ ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းမှထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အလိုအလျှောက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်အလွန်မြန်ဆန်သောတွက်ချက်မှုပြွတ်စက်များပေါ်ရှိဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကန ဦး အစိတ်အပိုင်းများအတွက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအချိန်ကိုပုံမှန်နည်းလမ်းများထက်သုံးပုံတစ်ပုံအထိလျှော့ချသည်။
ရှုပ်ထွေးမှုအပေါ် မူတည်၍ စျေးနှုန်းများမှာဒေါ်လာ ၁,၄၉၅ ခန့်ရှိသည်။ ကုန်ကျစရိတ်ကိုခန့်မှန်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းမှာသင်၏မော်ဒယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ တင်၍ နာရီအတွင်းအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောကိုးကားချက်ရရှိရန်ဖြစ်သည်။ Protolabs သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မှိုကိုရိုးရှင်းသောဆေးထိုးခြင်းပုံသဏ္theာန်၏တန်ဖိုးအနည်းငယ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆော့ဖ်ဝဲ၊
အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ကိုးကားချက်များကိုရယူခြင်းသည်ရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများနှင့်အချောသတ်များကိုပြလိမ့်မည်၊ သင်၏အစိတ်အပိုင်းကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြissuesနာများကိုမီးမောင်းထိုးပြပြီးအမြန်အလှည့်နှင့်ရရှိနိုင်သည့်ပေးပို့နိုင်သောရွေးချယ်မှုများ (သင်၏ပထဝီအနေအထားပေါ်မူတည်သည်) ကိုပြလိမ့်မည်။ သင်၏ပစ္စည်းနှင့်အရေအတွက်ရွေးချယ်မှုများ၏စျေးနှုန်းသက်ရောက်မှုများကိုသင်အမှန်တကယ်အချိန်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ ပြန်လည်ကိုးကားစရာမလို။ ဒီမှာ ProtoQuote နမူနာကိုကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အစေးကိုသုံးနိုင်သည် (သို့မဟုတ်) သင့်ပါသည်။
ဒီဇိုင်းပညာရှင်များသည်အစေးကိုရွေးချယ်သည့်အခါဆန့်ခြင်းစွမ်းအား၊ သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်ပြန့်ကျဲခြင်း၊ စက်မှုလက္ခဏာများ၊ ပုံသွင်ပြင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ဗဓေလသစ်၏ကုန်ကျစရိတ်များကဲ့သို့သောလျှောက်လွှာအတွက်တိကျသောပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများကိုစဉ်းစားသင့်သည်။ ပစ္စည်းရွေးရန်သင်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
ဆေးထိုးခြင်းပုံသဏ္forာန်အတွက် CreateProto '' သိုလှောင်ထားသောဗဓေလသစ်များကားအဘယ်နည်း။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် thermoplastic resin ၁၀၀ ကျော်နှင့်ဖောက်သည်ထောက်ပံ့သည့်အစေးများကိုလက်ခံသည်။ Protolabs ၏သိုလှောင်ထားသောဗဓေလသစ်စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။
ဘာကြောင့်ငါ 3D ပုံနှိပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုထက်ပုံသွင်းအစိတ်အပိုင်းကိုဝယ်သင့်သနည်း။
Protolabs မှပုံသွင်းထားသောအစိတ်အပိုင်းများသည်သင်ရွေးချယ်သောပစ္စည်း၏စစ်မှန်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ အမှန်တကယ်ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောမျက်နှာပြင်အချောထည်များဖြင့်ဆေးထိုးဆေးမှုတ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများသည်အလုပ်လုပ်ရန်စမ်းသပ်မှုနှင့်နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုအတွက်သင့်တော်သည်။
CreateProto Proposed Revision ဆိုတာဘာလဲ။
၎င်းသည်အရင်းအမြစ်ဖိုင်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် STEP, IGES နှင့် SolidWorks ဖိုင်များကိုပေးသည်။
သင်ကိုးကားချက်အပိုင်း ၃ ရှိအကွက်ကိုစစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့်အဆိုပြုထားသောတည်းဖြတ်မှုကိုသင်လက်ခံသည်။
Protolabs ဂျီသြမေတြီကိုသင့်မူလမူကွဲနှင့်နှိုင်းယှဉ်ရန်ကိုးကားချက်အပိုင်း ၂ ရှိ“ Download Revised Model” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင်၏ကိုယ်ပိုင်မော်ဒယ်လ်ကိရိယာတွင် Protolabs ပြသထားသောပြောင်းလဲမှုများကိုပုံတူပွား။ သင်၏အပိုင်းကိုကိုးကားရန်ပြန်လည်တင်ပါ။ ကိုးကားခြင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအကြားကိုက်ညီမှုရှိစေရန်ထပ်မံကောက်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်ကလိုအပ်သည်။
ဒီအပြောင်းအလဲကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူး (ဒါမှမဟုတ်လက်မခံဘူးဆိုရင်) ဘာလုပ်သင့်သလဲ။
+ 1-86-138-2314-6859 သို့လျှောက်လွှာအင်ဂျင်နီယာတစ် ဦး နှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများကိုဆွေးနွေးပါ customerservice@createproto.com.
လုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်ချက်များကိုဆွေးနွေးရန်လျှောက်လွှာအင်ဂျင်နီယာကို + 1-86-138-2314-6859 သို့ဆက်သွယ်ပါ customerservice@createproto.com.
အဆိုပြုထားသောပြင်ဆင်မှုများကိုအပိုထပ်ဆောင်းပေးစရာမလိုပါ။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောဂျီသြမေတြီကိုမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမဆိုစျေးနှုန်းသတ်မှတ်သည်။ အပြောင်းအလဲအချို့သည်စျေးနှုန်းတက်ခြင်းအပေါ်သို့သြဇာသက်ရောက်နိုင်သည်။ လက်တွေ့တွင်အသေးစားဂျီသြမေတြီပြင်ဆင်မှုများမှစျေးနှုန်းများအပြောင်းအလဲသည်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။
အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ Protoviewer plug-in ကို update လုပ်ရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။
အဆိုပြုထားသောပြင်ဆင်မှုများသည်အသစ်သော Protoviewer ဗားရှင်းများနှင့်သာသဟဇာတဖြစ်သည်။
Protolabs ပြောင်းလဲခြင်းအပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်၏အစိတ်အပိုင်းသည်အလုပ်မလုပ်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
သငျသညျစိတျအပိုငျးဒီဇိုင်းနှင့် function ကိုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အဖိုးတန်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်သင်မပါဝင်လိုပါကသင်၏အပိုင်းကိုတင်သောအခါမှတ်သားပါ။
3d ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံန်ဆောင်မှုများ, လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံထုတ်လုပ်ခြင်း, CNN Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ, cnc ရှေ့ပြေးပုံစံ, Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ, အစာရှောင်ခြင်းရှေ့ပြေးပုံစံ,